(tonga teto avy amin'ny Jodeo-kristianisma)
Ny jodeô-kristianisma dia fihetsiketsehana na fivavahana kristiana nipoitra tamin'ny Jiosy mitandrina ny Lalàn'i Mosesy (na Môizy). Izany fitenenana izany, izay vao noforonin'ny teôlôjiana kristiana tamin'ny taonjato faha-19 ka nanjaka nandritra ny fotoana lava ny fandalinana ara-tantara ilay lohahevitra, dia nisy nanohitra tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-21. Voalohany dia mitaky ny hamoronana ny teny hoe "paganô-kristianisma" izany. Faharoa, mba hialana amin'ny hevitra manalasala dia tokony ny kristianisma ivelan'ny taona 135 no ampiharana io teny io, ka anondroana ireo vondrona tsy nanaraka ny ankamaroan'ny Kristiana toy ny Nazôreana sy ny Ebiônita ary ny Elkasaita, ohatra.
1 Tantaran'ny jodeô-kristianisma
1.1 Ny jodeô-kristianisma tamin'ny Andro Taloha
1.2 Ny jodeô-kristianisma tamin'ny Andro Antenatenany
Tantaran'ny jodeô-kristianisma[hanova | hanova ny fango]
Ny jodeô-kristianisma tamin'ny Andro Taloha[hanova | hanova ny fango]
Ny Nazôreana dia vondrona ara-pivavanana jiosy mesianika izay fanta-pisiana tamin'ny taonjato voalohany, izay manaiky an'i Jesoa ho Mesia nefa manaja ny lalàm-pivavahan'ny Jiosy ka tsy mino ny maha Andriamanitra azy. Niantsoana antoko na sekta jodeo-kristiana niaina tamin'ny taonjato faha-4 izay nitandrina ny Lalàn'i Mosesy sy nino ny maha Andriamanitra an'i Jesoa ny anarana hoe Nazareana na Nazoreana.
Ny Ebiônita dia ireo Jiosy kristiana tamin'ireo taonjato voalohandohany nisian'ny kristianisma izay mino ny maha Mesia an'i Jesosy nefa manda ny maha Andriamanitra sy ny fiteraham-birijiny azy sady manamafy ny tokony hitandremana ny Lalàn'i Mosesy sy ny fombam-pivavahana jiosy. Tsy mampitovy ny Ebiônita amin'ny atao hoe Kristiana Jiosy (na Jodeô-kristiana) ny mpikaroka sasany, sahala amin'ny Nazareana. Ny mpikaroka hafa anefa, toy ny nataon'ny Rain'ny Fiangonana, dia milaza fa vondron'olona iray ihany ny Ebiônita sy ny Nazareana.
Ny Elkasaita dia ireo tao amin'ny fikambanana ara-pivavahana jodeô-kristiana batista sinkretika manam-pirehana gnôstika izay sady isan'ny jodaisma amin'ny ankapobeny amin'ny lafiny sasany, no isan'ny jodaisma nazôreana.
Ny jodeô-kristianisma tamin'ny Andro Antenatenany[hanova | hanova ny fango]
Ny jodeo-kristianisma amin'izao fotoana izao dia antsoina hoe jodaisma mesianika, izay teraka tamin'ny taonjato faha-20 tao amin'ny tontolo pentekôtista tany Etazonia. Izany dia fihetsiketsehan'ny kristianisma evanjelika izay mampifanindran-dalana ny teôlôjia kristiana sy ny fombam-pivavahana jiosy sasany: ekeny ny maha Mesia sy ny maha Andriamanitra an'i Jesoa(Yeshua). Ny tena fantatra indrindra amin'ny Jiosy mesianika, na dia tsy ny maro an'isa indrindra aza, dia ireo "Jiosy ho an'i Jesoa" naorin'ny pastora iray manam-piaviana jiosy (izay lasa kristiana) tamin'ireo taona 1970. Isan'ny tanjon'ilay vondrona ny hampianatra ny Kristiana evanjelika momba ny fiaviana jiosin'ny finoany, sy ny hiovan'ny Jiosy finoana ho amin'ny kristianisma. Tsy eken'ny Jiosy manaraka ny jodaisma mahazatra anefa ny jodaisma mesianika.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jodeô-kristianisma&oldid=995485"
Voaova farany tamin'ny 31 Jolay 2020 amin'ny 09:06 ity pejy ity.